ဖြေကျိပါ နှင့် အားလုံးဂိုစိတ်ကုန်ဒယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ဖြေကျိပါ နှင့် အားလုံးဂိုစိတ်ကုန်ဒယ်….
ဖြေကျိပါ နှင့် အားလုံးဂိုစိတ်ကုန်ဒယ်….
Posted by Wow on Jun 26, 2013 in Politics, Issues | 41 comments
– ဘာသာရေးအဓိကရုန်းမှာ လူသတ် အိမ်မီးရှို့သူတွေ ဘာလို့ လွတ်နေသေးတာလဲ….
– သတင်းထောက်တွေ ကင်မရာရိုက်ခွဲတာတွေ ဘယ်သူတွေလဲ…
– ကလားတွေ ဘုန်းကြီးတွေသတ်ကုန်ပြီလို့အော်နေသူတွေ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းတုံးက ဘုန်းကြီးတွေ တန်းစီပြီး လူညွန့်တုံးပစ်တာကော.. ကလားတွေပဲလား….
– မလေးမှာ ကလားတွေ မြန်မာတွေကို ၀ိုင်းသတ်နေပါပြီပြောပြီး တာဝန်အရှိဆုံး သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ သံရုံးတို့က ဘာတစ်ခုမှ action မယူခဲ့ပဲ.. ဒေါ်စုဘာလုပ်နေလဲလို့ ၀ိုင်းအော်တာ ဘယ်သူတွေလဲ….
– မြန်မာသံရုံးက အသိအမှတ် မပြုပေးလို့ သဂြိုလ်ခွင့်တောင်မရခဲ့တဲ့ ဇတ်နာတာတွေကို ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ…
– မလေးကမြန်မာတွေ သေရေးရှင်ရေးကျ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့ သမ္မတရုံး၊ အခု Time မဂ္ဂဇင်းကို အူးဇင်းဝီသူရ ကိစ္စကျ ချက်ချင်း ထကန့်ကွက်တာဘာလို့လဲ….
– ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအမှီ… ဘာသာရေးအဓိကရုန်းတွေ ဇယ်စက်သလိုဖြစ်လာနေတာတွေ ဘာလို့လဲ…
– ဒေါ်စုကို ကလားထောက်ခံသူဆိုတဲ့ Image ကို ပုံဖေါ်နေတာဘယ်သူတွေလဲ….
အော့နှလုံးနာလွန်းလို့ အောက်လမ်းနည်းတွေ သိပ်မသုံးစမ်းပါနဲ့..
ဟစ်တလာကို သဘောမကျဘူး.. ဒါပေမဲ့ အော့နှလုံးနာလောက်အောင်မဖြစ်ဘူး….
အမျိုးသိပ်ချစ်နေသလား… ခပ်ပြတ်ပြတ် ဟစ်တလာ ဂျူးလူမျိုး သန်းချီသတ်ခဲ့သလို လုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ….
ကျားကျားမီးယပ် အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ အောင်သိန်းလင်း ပြောင်းဖူးကိုင်ချီတက်လာသလို ၂၀၁၅ မှာ မြန်မာဘယ်လဲ…ဘာလဲ….
အမှားအမှန် မခွဲခြားနိုင်အောင် သိပ်ဥာဏ်နဲသူတွေများနေမယ်ဆိုရင်…. မားခိုင် ဇကားပဲငှားပြောရတော့မယ်…
ဒီ ပို့(စ) တင်မယ် ဆို လည်း စောစောပြောတာမဟုတ်ဘူးးးး
သီဟပူရက.. ခိုင်မမလား.. ကလေးပိပိအမေခိုင်ခိုင်လားဟင်င်…
♫♫ ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်တန်ရာပဲရမယ်..♫♫
ဟီးးးး…ကိုဘေးနွားခြံပိုင်ရှင် အယာတိုလာမာမွတ်ခိုင် ဂို ဆိုလိုတာပါချင့်….
ဒီအချိန်ဒါဒွေ စိတ်ဝင်စားဇာလား ..မ၀င်ဇားဘာဘု
သဂျီးကို ကုလာဂျီးလို့ စွပ်စွဲနေ အော်နေတာဘယ်သူတွေလဲ?
တန်ရာတန်ရာဘဲ ရနေတာ သိရဲ့နဲ့ ဇွတ်မှိတ်အော်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ ? ဟိဟိ ကြုံတဲ့နေရာကနေ ကြုံသလို ဖားထားအုံးမှ
သဂျီးကို မစွပ်စွဲဝံ့ပါဝူး… သူဂျီးသမက်လို့ဆိုသူ (ကြောင်ရီး) ပေါလို့ပါ…
လွယ်အိတ်လေးလွယ် အစုံသုတ်လေးစားမိတာ ဒါအပြစ်လား..
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာ ကုလားမယူရေးကိုပဲ အဓိကထားတဲ့ ဥပဒေလား ..။
ဘယ်ဒါဆိုရင် တစ်နှစ်ကို မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် နှစ်သောင်းလောက် ..
ငွေကလေး သုံးလေးသိန်းလောက်နဲ့ …..
တရုတ်ပြည်သွား ….။ တရုတ်နဲ့ယူ …. တံခါးပိတ်မုဒိန်းကျင့်၊ တံခါးပိတ်နေထိုင်၊ ကလေးမွေးပေး..။ တစ်နှစ်ပြည့် ..ပြန်လာ..။
အဲဒီလိုနည်းနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ သားစပ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့အကြီးဆုံး လူမှောင်ခို သားဖောက်လုပ်ငန်းကြီးကို …
တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ ……..။ ခိုင်မာရဲ့လား …။ ပြဌာန်းချက်တွေပါရဲ့လား …။
တရုတ်/ထိုင်းနယ်စပ်က မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို မှောင်ခိုကုန်ကူးမှု၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အဓမ္မ ခိုင်းစေမှုတွေအတွက် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်တွေ ပါရဲ့လား ….။
ပြည်တွင်းက ကေတီဗီ မာဆတ်တွေမှာ ဘ၀နာနေတဲ့ ဘ၀ပျက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် သမာအာဇိဝဆိုတာကိုနားလည်အောင် အသိပညာဖြန့်ဝေမှု၊ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘ၀အာမခံချက်ရှိအောင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပြုမှု စတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေ ပါဝင်ရဲ့လား ..။
မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာ အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ… ဒီအချက်တွေမပါဘဲနဲ့ ကာကွယ်နိုင်သလား ..။ ကာကွယ်နိုင်မှာလား ..။ အမျိုးစောင့်တယ်ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ ပြည့်စုံရဲ့လား …။
ဗုဒ္ဒဟောတဲ့ တရားးတိုင်း ရှိသမျှ ပိဋကတ်တိုင်းကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သာသနာ ကွယ်ခြင်း အကြောင်းတရား အကုန်လုံးတိုင်းမှာ ကျင့်စဉ်မမှန်၊ ပဋကတ်မမှတ်၊ ဗုဒ္ဒတရားမဟောကြား၊ အနက်မသိ၊ လေ့လာပျက်ကွက်၊ လာဘ်လာဘ ပရိသတ် ကိုသာယာတဲ့ သံဃာတွေကြောင့် သာသနာကွယ်တာပါသလား ..။
မာတုဂါမတွေကြောင့် သာသနာ ကွယ်တာလား ..။ ကျမ်းကိုးကျမ်းကား အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာလေးနဲ့ ဆွေးနွေးကြစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား …….။
အစိုးရ (သမ္မတရုံး) အနေနဲ့ Time မဂဇင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဒသာသနာ ညစ်နွမ်းရတာကို ကန့်ကွက်ခြင်းကို ……….. ထောက်ခံပါတယ်…။
အဲဒီလို ထောက်ခံသလို ……။
၁၉၉၀ ကျော်က တိပိဋကဆရာတော်များနဲ့ စာချဆရာတော်ကြီးမျးကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှု..။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာများ၊ သီလရှင်များအား နှိမ်နင်းမှု…။
ယနေ့ လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းအား မီးခိုးဗုံးဖြင့် မီးသင့်အောင်နှိမ်နင်းမှု ..။
စသည့် ခေတ်တလျောက်လုံး သံဃာတော်များ ကျီးလန့်စာစားနဲ့ ထောင်ကျသူက၊ ပျံလွန်တော်မူသူက ပျံလွန်၊ တိုင်းတပါးကို ပြေးသူကပြေး .. ပြည်တွင်းမှာလည်း ခရီးသွားခွင့်ပိတ်၊ တရားဟောခွင့်ပိတ်နဲ့ ………… နှစ်ပေါင်းများစွာ သာသာနာကို ညစ်နွမ်းကို လုပ်ခဲ့တဲ့ …
အစိုးရအနေနဲ့ ဓမ္မဓူတဆရာတော်တွေ၊ မဟနတွေ၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်တွေ၊ ဗုဒ္ဒတက္ကသိုလ် အဓိပတိကြီးတွေ . နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေ ရှေ့မှာ …..အခမ်းနားဆုံး အကြီးကျယ်ဆုံး တောင်းပန်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်…။
ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ………
မိမိတို့ အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ဘာသာကို ……. မိမိက လေးစားမှာ သူတပါးက လေးစားမှာပါ…။
Time ကို ဘာသာရေးအကြောင်းပြ မဲဆွယ်ကောင်းရုံ ကန့်ကွက်တယ်ဆိုရင်တော့ … သဘောပေါ့ဗျား..။
ဘဘမန်းကြီး ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို အရေးယူတော့မယ်ဆိုတော့ ပြုံးမိတယ်…။
မနှစ် တစ်နှစ်တုန်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးနဲ့ ငြိလို့ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကို အပြုတ် ဆော်လိုက်တာတွေ..။
အောင်ပြည့်စုံ ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် (နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်) ကို အစိုးရကို ဆော်ဖို့အတွက် အသုံးချခဲ့တာတွေ.။ အစိုးရက ဒါကိုသိတော့ reform လုပ်လိုက်တယ်..။ ရိုးသားတဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ်ကြီးကတော့ ဘဘမန်းကြောင့် ကြားညပ် ရာထူးပြုတ်သွားရှာပါတယ်..။
ခုလည်း NLD နဲ့ ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ….။
လွှတ်တော်ထဲက ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အူသံတွေဟာ ..အွန်လိုင်းကနေ ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေပေါ် တက်လာချိန်မှာ …. ပါတီဥက္ကဌ ရာထူးကော .. လွှတ်တော်ဥက္ကဌနေရာ ပါ ယူထားတဲ့ ဘဘမန်းခမျာမှာ … ရွေးစရာ နှစ်လမ်းရှိလာပါတယ်….။
(၁) ဘင်္ဂလီအမတ်တွေကို ချကျွေးမလား ….။
(၂) ၉၆၉ ကို ဆော်မလား …။
ဘင်္ဂလီ အမတ်တွေကို လူသိရှင်ကြား ဖြုတ်ရင် ပါတီနာတယ်..။ အဲဒီ အမတ်တွေကို မဲပေးဖို့ white card ပေးထားတဲ့ ၂၀၁၀ တုန်းက (၅) သိန်းကျော်ကိစ္စကို ပါ ၀န်ခံသလိုဖြစ်ပြီး မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဆက်ရှင်းရမယ်..။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်…။ လက်ရှိ ရခိုင်ဒေသက နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ၂၀၁၅ ကျရင် မဲပေးဖို့ ပြန်သုံးရင်လည်းသုံးနိုင်တယ်…။ ရန်ကုန်ထဲက ကုလားပရိသတ်ရဲ့ မဲပေးမှုဟာလည်း ရန်ကုန်က လုပ်ငန်းရှင် ဘူးသီးတောင် မောင်တော ဘင်္ဂလီအမတ်တွေအပေါ် မူတည်နေတာ ငြင်းမရဘူး ..။ ၂၀၁၅ မှာ ကုလားကိစ္စကြောင့် ကွဲကိန်းမြင်တဲ့အတွက် တစ်ဖက်က NLD နဲ့ ညွန့်ပေါင်းလည်း လုပ်ချင်နေတယ်…။ PR ကိုလည်း ကြိုးစားနေတယ်…။
ဒီတော့ … ၉၆၉ ကို ပါးပါးလေး .. ပုတ်လိမ့်မယ်..။ ထူထူ ပုတ်လို့ မရဘူး .။. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် အစိုးရကိုယ်တိုင် ကိုရဲမင်းဦးကို ချကျွေးဖို့ ဖမ်းထားပေမယ့် နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကို အခြေခံဥပဒေပါပုဒ်မတွေ ဘာသာချင်းစော်ကားရင် အဓိကရုဏ်းကို သွေးထိုးရင် အရေးယူလို့ရတဲ့ ပုဒ်မတွေ များစွာရှိတာတောင် ..မဖမ်းရဲဘူးဆိုတော့ …။ သူလည်း လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး ..။
ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ပါးပါးလေးပုတ်တဲ့ အတွက် online မှာ ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ NLD ကို ပွဲဆူအောင် ဖွနေတဲ့ အကောင့်တွေ page တွေက အသံတိတ်သွားတယ်..။ ကြည်းရေလေ ညှိနှုင်းရေးမှူးကြီးဆိုတော့လည်း ဆီနီယာကြီးကို လေးစားတဲ့ စိတ်က ရှိပြီးသားလေ…။ ဒေါ်စုတုန်းက ဘာညာ အော်နေတဲ့သူတွေ သူ့အလှည့်ကျ အီးကျယ်ကျယ်မပေါက်ရဲဘူးဆိုတော့ သူတို့ဘယ်ကဆိုတာ လူသိကုန်တယ်..။
အဲဒီတော့ မင်းသား.. ဇာတ်ဆရာ ဒါရိုက်တာကြီး . .ဘယ်လိုတွေ ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ
မင်းသားလုပ်မလဲ … စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ….။
သူ့နဲ့ သူ့ဆရာရင်းကြီးရဲ့သမိုင်းမှာတော့ အာဏာအတွက် အကုန်လုံးကို အသုံးချသွားခဲ့တာချည်းပဲ၊ ခကျွေးသွားတာချည်းပဲ ..။ ဘုန်းကြီးကော ကုလားကော .. ချန်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး …။
ဘယ်သူတွေ ကြားညပ်မလဲ ……..
(((((ခရက်ဒစ်။ ။ ငရဲသား)))))
တမီး မေးတာဟုတ်ဘူးနော်။ မြင်ဘူးတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ဆွဲထုတ်လာတာပဲရှိတာရယ်။
ကန္နားစီးကတော့ ဆေးမမှီတော့ဝူး… နယ်စပ်မှာ ဒင်းလူကုန်ကူးခံရမှ တရုတ်ကြီးတွေဆီမှာ ဒင်းဒူးနဲ့မျောက်ရည်သုတ်နေရမယ်…
အဲတုန်းကကျတော့ ဘာ့ကြောင့် ? (Credit : Nik Nayman )
“အမျိုးစောင့်ဥပဒေ” ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
သံဃာတော်အပါး ရာကျော်လောက်ရဲ့ 
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တုန်းက
ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ ချီပြီး
သူတို့က ပါးစပ်ကြီးတွေနဲ့အော်လို့ သားတို့က မီးလောင်ဗုံးလေးနဲ့ ပြစ်မိတာ.. ဒါအပြစ်လားတဲ့….
ဆွိ နဲ့ ဝေါင်း ကို ၂ယောက်ပေါင်းပြီး တပြိုက်နက် ထောက်ခံပါဂျောင်း..
မတိဝူး။ ချိတယ်ဆို ဒီ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေတွားဘာ ချွေအိလေးးးး
အဖြေပေးမယ်ပြောပြီးမှ အချိန်မတန်သေးဘူး ဆိုပြီး ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်တဲ့ ကိုကို့ကို
သမီး သိပ်မုန်းတာပဲ မေမေ…။
ဟိုက ကြိုးတိုတိုနဲ့ပဲ လှန်တော့မယ်ဒဲ့… လိုက်သွားချီ…
အူးလေးကတော့ အလှမ်းမဝေးတဲ့ ဒီဆန်းဒေးမှာ ဖြေစရာရှိတာမို့…
ဒီပို့စ်မှာ ဘာဆိုဘာမှ… မဖြေလိုပါ…
ဒါပေသည့် သဂျီးလက်သုံးစကားကိုကြိုက်လို့ ပြန်ပြောမယ်…
အူညူးနေတာ အူးကြောက်စ်တို့များ… ကျိကျိ …. ။ ဆယ့်လေးနှစ်သားလေးကျနေဒါဗြဲ ….. ။
ဒယ်ဒီဂိုယဲ ချိစ်ဘာဒယ် … ဒယ်ဒီတမီးလည်းချိစ်ဘာဒယ် …. ။
ဟိုးးးး… တုန်းက ဇော်ဝင်းရှိန်ကြီးရဲ့ ခေတ်ဟောင်းတေးကို အော်ဆိုလိုက်မယ်…
♫♫ ဒယ်ဒီရယ် ဦးအန်ကယ်… ဦးသမီးနဲ့ ကျောက်စ်မှာ သိပ်ချစ်နေကြတယ် ♫♫
မွှင်ဂါဆောင်ဘာ အိစ်စ် …. မင်ဂါဘာ မမwow
တီဗုဒ်ချို ချိုတလောက်ပဲ ၊ ထထဘီးအော်ဂျပေမယ့် ၊ ရီးလေ့စ် ရီးလေ့စ်ဒေက လေထိုးလေလျှော်နေတုန်းဗဲ မမရဲ့ …… ။ ဇဂေါယောက်မ ဂျောက်မနက်ဒဲ့အူးနှောက်ဒေကိုတော့ … တစ်ရာပေး… အဲစ် တရားဗျမနေဒေ့ါပါဝူးးးးး ။ ညက်နှာချင်းဆိုင် အယူဇမတူဒဲ့လူဒေတွေ့လို့ ဂျဂါးပျော့စ်မိလျှင် နဗမ်းထရုံးမိ ၊ လပင်းထညှစ်မိမှာ ချိုးလုိ့ …. လစ်လျူရှုထားဒယ် …. ။
အနာဂတ်ကို အညားရီးတော့ ညှော်လင့်ဒေါ့ဝူးး တန်ရာတန်ရာဗဲရပါလိမ့်မြီလို့ စိတ်လျော့ထားပါဒေါ့သီ ။
အိမ်းအိမ်းးးးးး …. ခေးတို့လိုက်ချိုဂျ … တခင်ညိုးဟဲ့ … ဒိုဘာမင်… အာာဝူး ခိခိ
အဖြေပေးမယ်ပြောထားပြီးမှ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားတဲ့ ချိတ်လုံချည်နဲ့ မမတွေကို သမီး သိပ်မုန်းတယ် မေမေ။
(အင်္ဂါZ)
ဟာကွာ အဟွာ အနာပေါက်မယ့် လူယီးဒွေ
P.Sကိုလင်းဝေကြီး သတိရသဗျာ ..တခြားဟာတော့မသိဘူး သူက ဆသရ ဆို ဒိုင်ခံ ဆဲတတ်တာ..။
လဲ လဲ လဲ တွေ ရဲ့အဖြေကို
သူကြီး ပြောတဲ့ စကားအရ ဆို
နှစ် ၁၀၀၀ ကျိန်စာ ကို ကျော် ဖြတ် ပြီး မှ
သိ ရ တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ ။
ဖုန်း နဲ့ ဘုန်း ခုမှ တွေ့တာ.
အသက်အောင့် ပြီးဖတ်ရတယ်မ အိတုံ ရေ…….။
ဟုတ်တယ်။ ဦးရွှေမန်းကြီးပြောသွားတယ်လေ။ နောက်ပြန်လှည့်နေသူတွေထဲမှာ တာဝန်အရှိဆုံးက သူတို့ကြံ ဖွတ်တွေတဲ့။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြန်လှည့်ချင်သူတွေ သူတို့ထဲမှာများမှများ။ အဲဒါဂွင်ဆင်နေတာ။
မမသဲ.. အခုက ဘယ်ကနောက်ကြောင်းလဲ ဘယ်ကရှေ့ကြောင်းလဲတောင် မသိတော့ပါဝူး…
အခု ပို့စ်မှာ ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ APK ကာတွန်းလေးသာကျိပါတော့…
အာဟိ လှည့်လွန်းရလွန်းလို့ ဘယ်ဟာဘာမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။ မိုက်တယ်။
ဘွားဒေါ်ဂျီး ပြောထားတယ်.. သူ့ကို အသုံးချမယ်ဆို ရပါတယ်တဲ့…။ လာလိမ့်အုံးမယ်.. နောက်အခါခါ… တကွက်ရွှေ့မှားတဲ့ကျား အခါခါ အစားခံရသတဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ…
အမတော် wow ရေ …
ဦးရဲထွဋ်တော့ ဒီလိုဖြေသွားပါတယ် ……
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေးနှင့်လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများတွင် အစိုးရနှင့် စစ်တပ် ပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဆိုသော ပြောဆိုချက်များကို ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်င့မှ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့ဘုတ်စ်သုံးသူ ၈ သိန်း ကျော်အနက် ၄ သိန်းမှာ အမည်တုများဖြင့် အသုံးပြုနေကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးရဲထွဋ်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Hate Speech ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးရဲထွဋ်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပြည်သူတွေက လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာရှိနေတော့ သာမန် ပြစ်မှုလေးတွေက ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာတယ်” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆိုသည်။
ဖေ့ဘုတ်စ် လူမှုကွန်ရက်သည် မြန်မာပြည်သူများအတွက် သတင်းများ သိရှိနိုင်ရာ ပထမဦးဆုံးသော သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်လာကြောင်း၊ တဦးနှင့်တဦး မလိုမုန်းတီးမှုများကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်မှုကြောင့် မုန်းတီးရေးစကားများသည် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ရှင်းပြသည်။
နောင်တော် မခံဘု …
မနေ့ညကမှ ရထားကိစ္စ သွားရိထားတာ …
ဧရာဝတီ၊ ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၃
– ရခိုင်မှာ ကျောက်နီမော်စီမံကိန်းကို ဘယ်သူဖန်တီးတာလဲ.
– ကျူးလွန်တဲ့ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်က ထောင်ထဲမှာဘာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားတာလဲ
– အဲ့စာရင်းမတိုင်တောင် ထောင်ချနေတဲ့နိုင်ငံမှာ တောင်ကုတ်မှာ မူဆလင် ၁၀ယောက်ကို ကားပေါ်ကဆွဲချသတ်တာ..အခုပေါ်ပီလား-
ဟိုဆြာကတော့ပြောသွားတာပဲ. ဒီ့ထက်ရှင်းတာ ပြတ်တာတော့ ဂျပန်မရေချိုးတာပဲရှိတော့သတဲ့
မိဂီ… ကမ္ဘာပတ် နူးဘာလုပ်တာတွေရပ်ပီး.. ကြောင်ရီး၊ အောင်ပုတို့နဲ့ပေါင်းပီး လူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ပါတီထောင်ရအောင်…
မကွဲတာတစ်ခုပဲကျန်တယ် (Credit- ငရဲ သား )
အင်းစိန် သံဃာ့အစည်းအဝေး အပြီးမှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကိစ္စ ဆွေးနွေးကြအပြီးမှာ ..
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအတွက် ..ထူးခြားတာတွေ … တော်တော်များများ ရှိလာပါတယ်.။
(၁) ဒီမို အုပ်စုထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၂) အစိုးရဌာနဆိုင်ရာထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ……..ကွဲလာပါတယ်..။.
(၃) ကျောင်းသားလူငယ်များထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၅) နိုင်ငံရေးပါတီများထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၆) ပါတီဝင်အချင်းချင်းထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၇) မိသားစု ဆွေးမျိုး ညီအစ်ကို မောင်နှမ ကြားထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ….ကွဲလာပါတယ်..။.
သူငယ်ချင်းများထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၉) အမျိုးသမီးထုကြားထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …….. ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁၀) သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ……..ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁၀) လွှတ်တော်အမတ်များထဲမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ …… ကွဲလာပါတယ်..။.
(၁) ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့လာမိတယ်.။ အလုပ်သမားလူတန်းစား လယ်သမားလူတန်းစား အခြေခံလူတန်းစား အများကြီး အများကြီးကြားထဲမှာ ကွဲနေကြတာတွေ ဆက်မရေးချင်တော့ဘူး …။
မကွဲပဲနဲ့ …… စုစုစည်းစည်းနဲ့ ဘာသံမှ မထွက်တာ institution တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်….။
ဒိုင်တော့ စားတော့မယ်နဲ့ တူဒယ်….။.
မြန်မာနိုင်ငံ က KTV /Massage မှာ အသွေးအသား ရောင်းစားနေသူတွေ
အများစု ၉၉ % က ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ များတယ်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တွေ ထဲ မှာကော ပညာမတတ် တဲ့ နွမ်းပါးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ
အများကြီး ရှိတာဘဲ သူတို့ ဘာဖြစ်လို့ ကေတီဗွီ။ မာဆတ် မရောက်သလဲ။
အင်တာနက် မှာ သိက္ခာချပြီး လိင်ဆက်ဆံ တဲ့ အခွေ တွေ။
ပုံတွေ အတင်ခံရတာ ဘယ်သူတွေလဲ။
မြန်မာ အမျိုးသမီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေဘဲ။
သူတို့ကို လိင်ဆက်ဆံပြီး ဓာတ်ပုံ။ ရုပ်ရှင် ခိုးရိုက်တာကော ဘယ်သူတွေလဲ ။
မြန်မာ အမျိုးသားဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တွေဘဲလေ။)
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ ကော ရီးစား မထားဘူးလား။
လိင် မဆက်ဆံဘူးလား။ ရီးစားထား။လိင်ဆက်ဆံ ကြမှာပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ရီးစား လိင်ဆက်ဆံဘက် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အချင်းချင်းက
ဒီလို မယုတ်မာ ကြလို့သာ သူတို့ ပုံတွေ အင်တာနက် ပေါ် မရောက်တာလေ။
( ရှင်းနေတာဘဲ။ သူတို့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် အချင်းချင်း စောင့် ရှောက်လို့ သာ
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ ပညာ မတတ်ပေမဲ့။ လိင်ဆက်ဆံပေမဲ့
အင်တာနက်ပေါ်လဲ မရောက်ဘူး။ ကေတီဗီ ။မာဆွတ် မှာလဲ မရောက်ဘူး။)
မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ပညာနည်းပါးတဲ့သူ တွေ ကေတီဗီ ရောက်တယ်။
မာဆတ် ရောက်တာ သူတို့ အဖေအမေ။ ညီ အကို မောင်နှမ။ လင်ချစ်သူရီးစား
မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င်တွေက ၀အောင် မကျွေးလို့။ လှအောင် မဆင်လို့ ။
ကိုယ့် လူမျိုး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အချင်းချင်း မစောင့် ရှောက်လို့ သာ ဖြစ်တယ်။
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ခန ထားပါဦး။
လောလောဆယ် မှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကေတီဗွီ။မာဆတ်။က မြန်မာ အမျိုးသမီး
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တွေကို ( မျိုးချစ်တစ်ဇောက်ကန်း အော် နေကြတဲ့
ဘယ် အကောင်မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တွေ အတည်ယူကြမလဲ။ )
စာရင်း အရင် လာပေးကြပါ။
နင်တို့ အခုအမျိုးချစ် တဲ့ အနေနဲ့။ အမျိုးကို တကယ် စောင့် ရှောက် မယ်
ဆိုရင် ဒီနေ့ ဦးသုံးကြိမ် အရင် ချမယ်။
Wai Yan Moe Myint စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
အေးချမ်းမွန် Credit To > အင်တာနတ် < Thank
Re-post By ACM 29-6-2013
စာရင်းပေးချင်တဲ့ အကိုများရှိရင် လက်တို့လိုက်ကြနော့….